Jabbuuti oo sheegtay in ay khasaare weyn gashay dagaalka Itoobbiya awgii | Biyoguurenews.com
Home Maqaallo Jabbuuti oo sheegtay in ay khasaare weyn gashay dagaalka Itoobbiya awgii
Dagaalka Itoobiya waxa uu halis ugu jiraa in uu meesha ka baxo horumarka dhaqaale ee 20 sano ee la soo dhaafay ka socday dalkan yar eeku yaal Geeska Afrika- Jabuuti.
Wasiirka maaliyadda Jabuuti, Ilyaas Muuse Dawaaleh, ayaa BBC u sheegay in 12-kii bilood ee u dambeeyay uu dalku ku khasaaray lacag u dhiganta kala badh hantida qaranka, ama 1.7 bilyan oo dollar, ka dib markii uu hoos u dhacay dakhligii iyo shaqooyinkii.
Colaadda muddada sanadka ah ka jirtay waqooyiga gobolka Tigray ee Itoobiya ayaa sii xumeeyay khalkhal ku yimid silsiladahii sahayda u ahaa ee u dhexeeyay labada waddan iyada oo ganacsigu hoos u dhacay. kaliya 20 boqolkiiba
Iyada ay taasi jirto ayaa hadana waxay dowladda fedaraalka ee Itoobiya ku gacan seyrtay baaqyada ah in qaab wada-xaajood ah lagu xaliyo muranka kala dhaxeeya xoogagga TPLF ee maamulka gobolka tagrey.
Taa badalkeeda waxay dowladda fedaraalka weerar ku qaaday xoogagga TPLF, waxayna xukuumadda Itoobiya sheegtay in arrintani ay tahay mid arrimaheeda gudaha quseeysa.
Dowladda ayaa ku tilmaamtay dagaalkan “howlgal amarka iyo kala dambeynta lagu soo celinayo kana dhan ah “koox yar” oo dooneysa in dastuurka Itoobiya ay burburiso.
Dagaalkan ayaa ka dhashay xiisad muddo dheer u dhaxeysay TPLF iyo dowladda fedaraalka, balse kumannan qaxooti ah ayaa durbadiiba u qaxay dalka Sudan taasi oo muujinaysa saameynta dagaalka.
Previous articleMaxaabiis Soomaali ah Oo Laga Sii Daynayo Jeelasha Suriya
Next articleMaxay darantahay booqashad madxawyne biixi ku imanayo berbera,